allsanaag.com - Ma Wadamaa Wada Hadlaya Mise Gobolo?
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3211	Days	05	Hours	09	Minutes	41	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Ma Wadamaa Wada Hadlaya Mise Gobolo?
Written by Shanle	Allsanaag: Barnaamijka Dood Wadaag ee Universal TV ayaa lagu soo qaaday wadahadaladii hore ee dhex maray Soomaaliya iyo Maamulka Hargeysa iyo weliba wadahadalada soo socda. Fadlan hoos ka dhageeso sidii dooda ay u dhacday.